Tun Tun's Photo Diary: September 2014
at 9/25/2014 01:37:00 AM Links to this post2comments:
စင်ကာပူက Chinatown ကို ဒီရက်ပိုင်းရောက်ဖြစ်သေးလား။ ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ.ညက ရောက်ခဲ့တယ်။ Chinatown ကို တရုတ်နှစ်သစ်ကူးလောက်ပဲ Decoration လုပ်ထားတာတွေ သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တယ်။ Mid-autumn festival decoration ကိုတော့ ဒီနှစ်မှ စပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်တာပါ။ ဘယ်လို အလှဆင်ထားသလဲ ဆိုတော့ ပန်းပုံ မီးပုံးတွေ ကို Chinatown လမ်း၂ဖက်မှာ အတန်းလိုက်ကြီး မီးထွန်းထားတာပါ။ မီးပုံးတွေက ရောင်စုံ ဆိုတော့ မီးထွန်းလိုက်တဲ့ အခါမှာ တေ်ာတော်လေးကို လှပါတယ်။ စရောက်ရောက်ချင်းမိုးရွာနေလို. မီးမထွန်းတော့ လာတာ အလကားဖြစ်ပြီးမှတ်နေတာ။ မိုးနည်းနည်းဖွဲသွားတော့ မီးစထွန်းပါတယ်။ သဘောကျတဲ့ ပုံလေးတွေကို စုစည်းပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
Have you visited Chinatown area these days? I was there on last Sunday night to take Mid-Autumn festival Decoration.This was my first time shooting lantern decoration. What I have normally shot in Chinatown was Chinese New Year Decoration. This year theme is flowers. All the lanterns are in colorful flower shape and look so beautiful when lit up. In this post, you can see my favourite photos of that night. Enjoy!
at 9/09/2014 07:32:00 AM Links to this post No comments:
Labels: Event, Night, Singapore, Street
at 9/03/2014 06:56:00 AM Links to this post 1 comment: